ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS အပေါ် flash | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ » ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS အပေါ် flash
ခေါ်ရန်နှင့် SMS ကို APK ကိုအပေါ် flash
တောက်ပအခမဲ့တပ်လှန့်လျှောက်လွှာ။ မှောင်မိုက်သောအရပ်တို့ကိုမတွင်သို့မဟုတ်ဖုန်းမြည်သံသို့မဟုတ်တုန်ခါနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေရှိရာအစည်းအဝေးများအတွက်တော်တော်အသုံးဝင် flash ကိုသတိပေးချက်။ ခေါ်ဆိုခအပေါ် Flash ကိုတပ်လှန့်ကင်မရာကိုလက်နှိပ်ဓာတ်မီး၏မှိတ်နှင့်အတူတစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ် SMS သင်သတိပေးတဲ့စမတ် application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် SMS ကိုအပေါ်ခေါ်ဆိုခနဲ့ flash ပေါ်မှာဤ flash ကိုဦးဆောင် blinking.This app ကိုအတူ flash ကိုသတိပေးချက်အားဖြင့်ရှင်းလင်းစွာသင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့နောက်ကျောကနေတစ်ဆင့်အလင်းကို flash သတိပေးချက်များကိုသင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်, နောက်ကျောဘက်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုသတိပေးချက်များနှင့် sms ကိုသတိပေးချက်ပေးခြင်းမျက်တောင်ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ blinking မခေါ်နဲ့ sms ကို LED ညွှန်ပြချက်မျက်တောင်ခတ် LED ။ အဆိုပါ blinking လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတပ်လှန့်အသိပေးချက်များကိုတစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်ဝင်လာသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူလာသောအခါဖုန်းကိုကွင်းကိုကြည့်ပါ။
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် sms ကိုအပေါ် Flash ကိုတပ်လှန့်။ တစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုရောက်ရှိသည့်အခါခေါ်ဆိုခလျှောက်လွှာအပေါ်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း blinking flash ကိုသငျသညျအစာရှောငျ flash ကိုသတိပေးချက်များကိုပေးသည်။ SMS ကိုအပေါ်ခေါ်ဆိုခများနှင့် flash ကိုအပေါ်ကို flash အတူ blinking ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသတိပေးချက်များနှင့် sms ကိုသတိပေးချက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့။ ခေါ်ဆိုခ app ကိုပေါ်မှာဤ flash ကိုအသုံးပြုသူ-friendly နဲ့ flash သတိပေးချက်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သငျသညျဖုန်းခေါ်အသစ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိသောအခါ, flash ကိုမျက်တောင်ခတ်ပါလိမ့်မယ်။
လက်နှိပ်ဓာတ်မီး Calling, စိတ်ကြိုက်ရန်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါသည်။ Flash ကိုသတိပေးချက်ခေါ်ဆိုခအသိပေးချက်များကိုသတိပေးချက်များနှင့် SMS ကိုအကြောင်းကြားစာသတိပေးချက်အဘို့ကင်မရာ flash ကိုအကြောင်းကြားစာကိုအသုံးပြုသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ကိုကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအတွက် Flash ကို blinker ။ သငျသညျခေါ်ဆိုခများနှင့် sms ကိုအပေါ်တောက်ပ Flash ကိုအလင်း, sms ကိုအပေါ်သတိပေးချက်များကို flash သတိပေးချက်များ, ခေါ်ဆိုမှုကိုအပေါ်ကို flash သတိပေးချက်များ, flash ပါသတိပေးချက်အပေါ် flash ကိုမှိတ်အဖြစ်ဤလျှောက်လွှာကိုသုံးနိုင်သည်။
✔ App ကိုကွဲပြားခြားနားသောဖုန်းကို Modes သာ (Ring ကို, တုန်ခါအသံတိတ်) တွင်အလုပ်လုပ်ရန်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
✔တစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူသို့မဟုတ်ပိတ်အားလုံးမှိတ် flash ကိုသတိပေးချက် Turn
ဖုန်းကိုအဝင်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဝင်လာသော SMS နဲ့သတိပေးချက်တဲ့အခါအသံမြည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး✔
✔ခေါ်ဆိုခသတိပေးချက်နှင့် sms ကိုများအတွက်အချိန်ပေါ် Set flash ကိုသတိပေးချက်သတိပေးချက်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ flash
✔ခေါ်ဆိုခသတိပေးချက်နှင့် sms ကိုအချိန်ချွတ် Set flash ကိုသတိပေးချက်သတိပေးချက်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ flash
✔ Flash ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပေါ်သတိပေးနှင့် sms ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုနိမ့်မှတ်ဉာဏ်စားသုံးမှု App ဖြစ်ပါတယ်။
အသံမြည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး✔သင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားသောအက်ပ်များမှအဝင်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဝင်လာသော SMS နဲ့သတိပေးချက်များ
✔ကိုသင်အကြိမ်ရေ blinking ထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်
✔ဒီ flash ကိုသတိပေးချက်ဦးဆောင်ပြီးနှငျ့သငျဆိုခေါ်ရန်နှင့် SMS ကိုလက်လွတ်မလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအကူအညီနဲ့အူ
ဘက်ထရီအဆင့်နိမ့်သည်လာသောအခါ✔အလိုအလြောကျ flash ကိုသတိပေးချက်များကိုချွတ် Set
သာဘက်ထရီကယ်ဖို့သော့ခတ်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ OFF လား ON ✔ပြောင်းလဲမည်ကို flash သတိပေးချက်
ON ✔ Set flash ကိုသတိပေးချက် Facebook က, Messenger ကိုတူသောအခြားမည်သည့် installed applications များအဘို့, WhatsApp, Viber, IMO, WeChat, Instagram, Twitter, Snapchat စသည်တို့ကို
LED အလင်း Controller တဲ့အခါမှာသုံးပါ:
•သင်သည်တိတ်ဆိတ်စွာပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရှိသည်ပေမယ့်သင်ဆဲ (ရုပ်ရှင်ရုံ, ပြဇာတ်, ကလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့, etc) စာပို့သူကိုသိရန်လိုအပ်
•သင်ခေါ်ဆိုသူ၏သိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့် (ညီလာခံသို့မဟုတ်အစည်းအဝေး၌) အပေါ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်လို့မရဘူး
•သင်ကဆူညံတည်နေရာနေနှင့်သင့်ဖုန်းမြည်သံ (ကော်ဖီဆိုင်များ, ပါတီများ) မကြားနိုင်
ဒီ app သင်သည်များစွာသောအချိန်များတွင်အလွန်အသုံးဝင်နေသောအသိပေးချက်များကို flash ကိုငါပေးမည်။ မိုဘိုင်းကိရိယာ၏လက်နှိပ်ဓာတ်မီးမျက်တောင်ခတ်သည်။ ဖလက်ရှမီးတပ်လှန့်သင့်ရဲ့ android ဖုန်းကိုတုန်ခါမှုသို့မဟုတ်စကားအပေါ်အခါညဉ့်အချိန်ရှိလူများကကူညီပါလိမ့်မယ်။ အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး, တစ်ဦးကအေးမြလက်နှိပ်ဓာတ်မီးတပ်လှန့်ဒါမှမဟုတ် flash သတိပေးချက်လျှောက်လွှာ။
သငျသညျဖုန်းခေါ်အသစ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိသောအခါ, flash ပါဒီ flash ကိုသတိပေးချက်တွေနဲ့မျက်တောင်ခတ်ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်: အခြေအနေဘားပြောင်းလဲခြင်းသည်အခြား installed apps များအဘို့ကို flash သတိပေးချက်ဖြစ်ပေါ်မပါဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစစ်ဆေးပါ။
1 ။ Accessibility Feature ကို enabled လား?
2 ။ အခြေအနေဘားပေါ်ပြောင်းနည်းသလဲ?
3 ။ သငျသညျအခြေအနေဘားပြောင်းလဲမှုကနေသတိပေးချင် apps များကိုရွေးချယ်ပါ။
+ ပျက်စီးမှုများ Fixed
ခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS အပေါ် flash